10 Taonan’ny Bilaogy: Misy Lanjany Amin’ny Haino Aman-jery Nentim-paharazana Ve Ny Bilaogy? · Global Voices teny Malagasy
10 Taonan'ny Bilaogy: Misy Lanjany Amin'ny Haino Aman-jery Nentim-paharazana Ve Ny Bilaogy?
Voadika ny 02 Febroary 2018 15:54 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Marsa taona 2007 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fanamarihan'ny tonia: Ny lahatsoratra manaraka dia nivoaka voalohany tao amin'ny bilaogin'ilay Ekoadaoreana, mpampianatra Fifandraisana, Christian Espinosa ary nadikan'i Linda Evarts, mpandika teny an-tsitrapo tamin'ny teny Anglisy. Raha liana handray anjara amin'ny asan'ny Global Voices amin'ny fandikàna lahatsoratra avy amin'ny bilaogy tsy amin'ny teny Anglisy ianao, dia mifandraisa amin'ny Tonian-dahatsoratry ny Faritra na ny Teny misy anao.
Raha namaky fanehoan-kevitra momba ny tsingerintaona faha-10 ny bilaogy (anisan'izany ireo navoaka tao amin'ny El País [ES] ao Espaina sy ny Infobae [ES] ao Arzantina), nieritreritra momba ny lahatsoratra navoakan'ny El Comercio ao Ekoadaoro aho.
Fanehoan-kevitra avy amin'ilay tonian-dahatsoratra momba ny teknolojia, Andrea Rodríguez izany, izay nanaraka ny tranonkala 2.0 miaraka amin'ny zotom-po izay entiny amin'ny fianarany siansa. Amin'ny fanaovana izany, nametraka ny Cobertura Digital tao amin'ny sarintany miaraka tamin'ny asa sorany momba ny fampandrosoana ny asa fanaovan-gazety sy ny bilaogy any Ekoadaoro sy ny faritra izy.
Milaza ny antontan'isa avy amin'ny www.ecuablogs.com, vondrom-piarahamonin'ireo bilaogera Ekoadaoreana (izay tsy noraharahiana hatramin'izao — mbola ho velona indray ve? — manantena …) ny lahatsoratra El Comercio.
Ny lohatenin'ilay lahatsoratra: “Mankalaza ny tsingerin-taona faha-10 ny bilaogy ary mitombo hatrany“
Saingy inona no tena fiantraikan'ny bilaogy amin'ny fampahalalam-baovao nentim-paharazana any Ekoadaoro na inona no misy ankehitriny? Misy lanjany ve izy ireo? Ato amin'ny Cobertura Digital, nanangona ny santionany amin'ireo eritreritry ny bilaogera izahay …
Erebé.net mihevitra fa tsy dia misy fiantraikany ny bilaogy, raha jerena ny fampitahàna an'i Ekoadaoro amin'ny firenen-kafa. Na izany aza, mifototra amin'ny fahatakarana lavitra indrindra azon'ny blaogy atao sy ny fitantaran'ny haino aman-jery azon'izy ireo tao Ekoadaoro faramparany teo, mieritreritra aho fa nahavita zavatra betsaka kokoa tsy araka ny fiheveran'ny Erebé.net izy ireo … Be fanantenana be loatra ve aho?
Mankasitraka ny asan'ireo mpanao gazety namana Ekoadaoreana maromaro aho ankehitriny izay miasa ho an'ny famoahan-gazetim-pirenena malaza ary ahafahana manana fifandraisana akaiky amin'ny mpihaino azy ireo ny bilaogy (raha tsy maintsy niangavy mafy izy ireo teo aloha mba hisy olona hanoratra taratasy ho an'ny tonian-dahatsoratra).
Ricardo Tello, no Tonian-dahatsoratra Mpitantana ny El Tiempo, gazety malaza indrindra ao amin'ny tanàna lehibe fahatelo ao amin'ny firenena ary koa mpanoratra ao amin'ny bilaogy “Hablemos de periodismo”. (Azo antoka fa izy no Tonian-dahatsoratra voalohany Mpitantana bilaogy ao Ekoadaoro.)
Christian Caiza no iray amin'ireo mpanao gazety ara-panatanjahatena mendrika indrindra ao amin'ny Radio Sonorama, anisan'ny onjam-peo malaza indrindra ao amin'ny firenena ary mitàna ny bilaogy Cyberfútfol izy (nanoratra avy any Alemaina izy nandritra ny Amboara Manerantany).
César Ricaurte mamoaka lahatsoratra famakafakàna lehibe ao amin'ny El Universo, gazetim-pirenena malaza indrindra, ary manoratra ao amin'ny bilaogy tsy miankina “Taratasy rovitra Tamin'ny kahie” (Las hojas arrancadas del cuaderno).
Eric Samson no Filohan'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Vahiny ao Ekoadaoro—anisan'ny mpikarakara fivoriana miaraka amin'ny (Filoha Ekoadaoreana) Rafael Correa izy—ary manoratra bilaogy amin'ny asa fanaovan-gazetim-bahoaka.
Guido Moreno, mpandresy tamin'ny fifaninanana nokarakarain'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Asa Fanaovan-gazetim-baovao, manoratra bilaogy antsoina hoe Tontolo Mahaleotena (Palabra Independiente).
Manolo Sarmiento manoratra ao amin'ny Teletoxia, takelaka lehibe mitsikera ny haino aman-jery ao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro HOY, ary manana ny bilaogy Edocmanolo.
Jorge Aguirre, izay mpanao fanadihadiana amin'ny fandaharam-baovao isa-maraina Gamavisión, manana bilaogy antsoina hoe Jorge Aguirre.
Jorge Piedra mitantana ny iray amin'ireo radio malaza indrindra ao Cuenca ary manoratra ny heviny ao amin'ny bilaoginy Cuencanos en el planeta.
Radio Guamote manoratra ao amin'ny radioguamote.blogspot.com, bilaogy hanaovany ny asa fanaovan-gazety ao an-toerana manontolo, mitondra ny songadina amin'ny haino aman-jery eny amin'ny vondrom-piarahamonina tompotany izay zara raha mahazo fitantarana amin'ny haino aman-jery nentim-pahrazana.
CIESPAL, iray amin'ireo sekoly malaza indrindra momba ny asa fanaovan-gazety ao Amerika Latina, mitantana ny Chasqui, bilaogy amin'ny endrika gazetiboky momba an'i Amerika Latina.
Ary ny mifandraika amin'ny media antserasera…
Diario Hoy: Mahita sehatra natsangana vao haingana isika eto, ho an'ny fampiroboroboana ny bilaogy amin'ny endrika nomerika an'ny gazety.
Radio CRE: Na dia eo aza ny tsikera ataony foana amin'ny bilaogy, manana ny bilaoginy manokana ho an'ny mpiseraserany sy ny mpihaino azy ny radio Guayaquil
Sonorama: Orlando Pérez, mpamakafaka malaza ao amin'ny gazety HOY ary mpamokatra fandaharana amin'ny radio Sonorama, manana bilaogy antsoina hoe Hot Potato (La papa caliente).
Informed Citizenry: Paúl Mena, talen'ny Olom-pirenena Manara-baovao ao amin'ny Tranonkala (Ciudadanía Informada.com) sy tonian-dahatsoratra ara-politika teo aloha tao amin'ny gazety HOY, manoratra bilaogy momba ny politika, baolina kitra sy ny asa fanaovan-gazety.
Confirmado.net miezaka manamafy ny fahaiza-manao momba ny bilaogy—(na dia mbola amin'ny endrika famoahan-dahatsoratra an-gazety aza)—amin'ny alalan'ny fanomezan-tsehatra ho an'ny mpanao gazety amin'ny fahitalavitra, Gonzalo Ruiz, ankoatra ny hafa.
Ary ny bilaogy mikasika ny seraseram-bahoaka an-gazety
Cobertura Digital dia nifantoka tamin'ny bilaogy sy ny asa fanaovan-gazety ho toy ny loharanon'ny asa sy ny fihariana.
Christian Espinosa, mpitati-baovaon'ny Tiempos del Mundo, manoratra ao amin'ny gazetiboky Diners and Criterios ary mamokatra fandaharana amin'ny radio, Nuevo Tiempo sy mitàna ny Cobertura Digital mba hanampiana ireo mpanao gazety sy ireo mpiasan'ny seraseram-bahoaka hamolavola, hanamboatra sy hamokatra bolongana.
Bilaogy momba ny Vaovaon'ny Polisy: www.policiales.coberturadigital.com
Fotoana ho an'ny bilaogy ao Tiempos del Mundo: www.tdm.coberturadigital.com
Lahatsary bilaogin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, La Hora Nacional: www.horanacional.com
Tranonkala sosialy momba ny fandaniana ao Ekoadaoro: www.inversionsocial.ec
Ny dika beta amin'ny Fahitalavitra Nomerika Cobertura dia ahitana lahatsary bilaogin'ny asa fanaovan-gazetin'olon-tsotra momba an'i Ekoadaoro.
Misy adino ve? Manorata
-Misaotra ny fanehoan-kevitra iray, nahatsiaro isika fa mitantana gazety manome fanavaozam-baovao ho antsika hatrany mikasika izay zava-mitranga ao Naranjal i Rafael Méndez:
-Guillermo Granja, mpaka sary Ekoadaoreana malaza ary tompon'ny Agencia ankehitriny nanoratra bilaogy ho antsika: http://guillermo.fotografosecuador.com
Colombia: vaovao momba ny bilaogin'i Víctor Solano